Ra’iisul wasaasaha Soomaaliya oo ku baaqay si loo gurmado meelaha Fatahaadaha saameeyeen | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home Top News Ra’iisul wasaasaha Soomaaliya oo ku baaqay si loo gurmado meelaha Fatahaadaha saameeyeen
Ra’iisul wasaasaha Soomaaliya oo ku baaqay si loo gurmado meelaha Fatahaadaha saameeyeen
Baladweyne(HNN)- Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda, mudane Xasan Cali Khayre oo guddoomiyay kulan looga hadlay Xaaladda bini’aadninimo ee Beledweyne iyo gobalka Shabeellada Dhexe, ayaa ku baaqay gurmad deg deg ah si looga hor tago in xaaladdu kasii darto.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa caddeeyay in dowladda oo dhexda ka dabaaleyna dhibaatada ka dhalatay Karoona ay hadana ay wajeheyso xaalad bini’aaninimo oo ka dhalatay wabiga Shabeelle ee karkaarrada jabdaday, kaas oo baabi’iyay dhul beereed, guryo dumiyay, ganacsiyadii waaweynaa saameeyay, kumannaan dad ahna barakiciyay. Daadadka Beledweyne waa kuwa soo laalabta, sanad kastana khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayeyna geytaan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa nasiib darro ku tilmaamay in sanad kasta dadka Soomaaliyeed ay wajahaan dhibaatooyin la sii ogyahay, waxuuna ka qayb galayaasha shirka u sheegay in taageerada saaxiibada caalamku siiyaan Soomaaliya aan laga gaareyn ujeedadii horumarineed ee laga lahaa inta daadaka iyo maamulka biyaha xal waara loo helayo.
Previous articleAxmed Madoobe oo markale wada-hadallo ugu baaqay dowladda Federaalka
Next articleWHO oo sare u qaaday hawlgallada COVID-19 ee Soomaaliya